Kaabayaasha - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Wadaagga ah
Bogga ugu weyn/Kaabayaasha
Hordhac kooban oo ku saabsan U diyaargarowga Musiibo: Xirfadaha Badbaadada Kacaanka No. 10
Iyada oo ay jiraan dhammaan naxdintii sanadkii la soo dhaafay, burburka ay keeneen masiibooyinka deegaanka sida duufaannada iyo dabka duurka ayaa ka fayow wacyiga guud ee dhaqanka. Waxaan iska indhatireynaa hanjabaadahan qatartayada. Maaddaama dhibaatada cimilada ay sii kordheyso mid sii daran, daadad daran, duufaanno musiibo wata, iyo dabka baaxadda leh waxay noqon doonaan xaqiiqo nololeed oo aan laga fursan karin, sida kaneecada soo baxda xilliga kulaylaha.
Tilmaamaha Muwaadinka ee Biyo-hagaajinta
Bioremediation waa adeegsiga microbes si loo nadiifiyo carrada wasakhaysan iyo biyaha dhulka hoostiisa. Microbes waa noole aad u yar, sida bakteeriyada, oo si dabiici ah ugu nool deegaanka.
Tilmaamaha Muwaadinka ee Nidaamka Dib-u-hagaajinta
Phytoremediation waxay isticmaashaa dhir si ay u nadiifiso jawiga wasakhaysan. Dhirtu waxay kaa caawin kartaa nadiifinta noocyo badan oo wasakh ah oo ay ka mid yihiin biraha, sunta cayayaanka, walxaha qarxa, iyo saliidda.
Hay'adda SKAT, iyo. al.
Buugga Tababarka Dhismaha Aasaasiga ah ee Tababarayaasha
Buugani wuxuu si gaar ah diirada u saarayaa heerka hirgelinta wax ku oolka ah wuxuuna bixinayaa macluumaad aad u tiro badan oo muhiim ah iyo sidoo kale qiyaaso iyo wax aan loo qaban tababarayaasha si ay ula xiriiraan jasiiradaha iyo kormeerayaasha inta lagu guda jiro aragtida iyo tababarada shaqada. Waxa kale oo ku jira sawirro iyo sawir gacmeedyo / sawirro kuwaas oo si cad ugu daraya macnaha guud. Sawiradan iyo sawir gacmeedyadan waxaa laga soo ururiyey ilo tixraacyo kala duwan sidaa darteedna, ma ahan dabeecad isku mid ah qaabkeeda hadda.
Goobta Aasaasiga ah ee Duurjoogta: Xirfadaha loogu talagalay Badbaadada Kacaanka No. 9
Markay dad badani ka fikiraan ku noolaanshaha bannaanka, waxay ka fikiraan Kaamamka. Kaamamaynta, boorsada dhabarka, iyo socodka waa hawlo madadaalo oo ah hab lagu raaxeysto oo lagula kulmo dabeecadda xilliyadaas dhifka ah ee waqtiga firaaqada ah. Waxqabadyadani waxay ka koobnaan karaan waxyaabo ka mid ah duullimaadka / duulista, laakiin hawlahani waxay leeyihiin rajo aad u kala duwan oo loogu talagalay qalabka loo baahan yahay, xilliyada la filayo in laga fogaado iyada oo aan dib loo soo celin, iyo tixgelinta amniga.
Baaldi Meshnet Node
Tilmaamahan wuxuu kugula socon doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u dejiso oo aad u maamusho shabakad isgaarsiineed, baahin baahsan.
Musqulaha Beerista: Hordhac
Musqulaha la iskudarsado ayaa ah suuliyo tiknoolajiyad hoose ah, oo aan biyo lahayn. Waxaa loogu talagalay inay siiyaan deegaan wanaagsan wakiilada bayoolojiga ee burburka sida bakteeriyada, caaryada iyo fangaska oo saxarada iyo kaadida u kala jajabiya.
Qalabka Isgaarsiinta ee Jabhadaha: Xirfadaha Badbaadada Kacaanka no. 5
Xaqiiqda wajaho. Waxaan kuxiran nahay aaladahayaga siyaabo si aan caadi aheyn waxtar ugu leh abaabulka, laakiin taasi waxay sidoo kale noo muujineysaa go'doomin haddii gobolka iyo shirkaduhu ay ka qaadaan tikniyoolajiyadan. Telefoonada gacanta iyo internetka waxay ku tiirsan yihiin kaabayaasha shirkadaha waxayna ku xiran yihiin ilaalin dowladeed iyo diidmo adeeg labadaba.
Dugsiga Jaamacadda Caafimaadka Dadweynaha ee Washington
Las partículas en el humo de los incendios forestales no saludables para respirar.
Un filtro de ventilador de caja simple ayudará a mantener limpio el aire gudaha.
Dhimasho Marar Badan
Tilmaamaha Isticmaalaha Musqusha ee Compost
Nidaamka Musqusha ee Composting ee Musqusha. Tilmaanta hagaajinta isticmaalka iyo dayactirka
Wasaaradda Guriyeynta, Dhismaha, iyo Adeegyada Dadweynaha Sethsiripaya
Dhismaha Buugga Taangiyada Mashiinka Mashiinnada Sunta lagu xoojiyay
Fiiro gaar ah: dukumintigaan waxaa laga baaray buugaagtii hore iyo halbeegyadii ay diyaariyeen Neil Herath ee CWSSP - Srilanka (Abriil 1995), iyo Buugga 3aad ee Taxanaha Buugga Farsamada ee Biyo Siinta iyo Nadaafadda Reer Miyiga; Nidaamka Bixinta Biyaha Cuf-isjiidka: naqshadeynta iyo dhismaha (Janaayo 2005). Waxaa dib loo naqshadeeyay si ay u ekaato shaqadii hagitaanka tilmaamaha shaqada ee 2005 CWSSP ee taangiyada madaafiicda sibidhka ee siligga lagu xoojiyay.
Qalabka Jarida ee Farshaxanka Goobta: Xirfadaha loogu talagalay Badbaadada Kacaanka No. 8
Qalabka goynta ayaa ah qaar ka mid ah kuwa ugu da'da weyn, qalabka ugu muhiimsan ee ay dadku u isticmaalaan inay ku gooyaan, ku xiiraan, ku qaabeeyaan, ku xiraan, uguna gowracaan waxyaabaha nolosha ka dhigaya mid lagu raaxeysto. Maanta qalabkani wali waa aalado muhiim u ah lahaanshaha iyo ka faa'iideysiga, nolol maalmeedka, iyo farsamada goobta.
Jardiinooyinka Roob-ka-Celinta Cilmiga ah ee Ku-Meel-gaadhka ah
Beeraha roobka waxay yareeyaan saameynta daadadka waxayna dib u aasaan jawiga deegaanka, dhammaantoodna waxay uga baahan yihiin shaqo yar dadka. Nidaamka rakibaadda ayaa ah midka ugu baahida badan aadanaha, laakiin beertu waa inay ahaataa mid iskeed u madax bannaan haddii aan abaar ama qabow dhicin. Jardiinooyinka roobku waxay u shaqeeyaan nadiifinta biyaha dhulka hoostiisa, waxay ka weeciyaan kiimikada ururinta durdurrada iyo nidaamyada biyaha, waxay yareeyaan saameynta nabaad-guurka, waxayna hagaajinayaan caafimaadka dhammaan nidaamka deegaanka.
Tani waa hoyga deg-degga ah ee cimilada cabiraya oo aad u fudud (qiyaastii 1lb 5 wiqiyadood oo aan lahayn tiir & saami). In kasta oo ay jiraan naqshado dhowr ah oo loogu talagalay hoyga Tyvek, haddana waxaan ka helnay badankood kuwo aan caddayn oo aad u dhib badan baahiyahayaga. Waxaan tan ugu talagalnay hal qof iyo qalabkiisa laakiin tani waxay qaadi kartaa laba qof oo dhaadheer si raaxo leh.
Qalabka Qiimaynta Baahiyaha Tamarta
Siinta ururada ku saleysan gobalada ka baxsan shabakadda macluumaadka iyo ilaha si ay u qaabeeyaan una hirgeliyaan barnaamijyo kordhiya helitaanka tamarta ee bulshada.
Biyaha, injineernimada iyo xarunta horumarinta
Qashin Bixinta Xaaladaha Degdegga ah: Buugga Goobta
Waxaa guud ahaan la oggol yahay in qashin-saarka ka-hortagga la siiyo mudnaan ka yar xaaladaha deg-degga ah marka loo eego waxqabadyada kale ee bani'aadamnimada sida daryeelka caafimaadka, cuntada iyo helitaanka biyaha. Tani waa iyadoo ay xaqiiqda tahay in badan oo ka mid ah cudurrada ugu badan ee ku dhaca xaaladaha degdegga ah ay sababaan tas-hiilaad fayadhowr oo aan ku filnayn iyo ku-dhaqanka nadaafadda oo liita.
Ferrocement waa nooc ka mid ah shubka khafiifka ah ee lagu xoojiyay lakabyo mesh dhexroor dhexdhexaad ah oo yar yar. Badanaa waxaa laga sameeyaa madaafiic laga soo qaaday Portland sibidhka iyo ciidda lagu dhejiyo xoojinta birta oo badanaa lagu bixiyo qaab mesh silig furfuran iyo / ama baararka dhexroor yar yar ama fiilooyin u dhow.
Gaia's Garden: Tilmaamaha Guryaha-Miisaanka Guryaha
Dhaqdhaqaaqa ku aaddan qurxinta dhirta waara ayaa kululaanaya. Jardiinadu waxay sii kordhayaan aaska kheyraadkooda, iyo cawska eber-ku-noolka ah ee ka hooseeya jardiinooyinka dhirta, dhirta duurjoogta ah ee soo jiidata, iyo dhirta qorraxda qorraxdu ka go'do. Waa isbeddel dhiirrigelin ah, dhaqdhaqaaqani xagga dhawaq ahaan u leh deegaan dabiici ah, dabeecado saaxiibtinimo leh.
Gargaarka Guud ee Gargaarka Meg Perry Mashruuca Ciidda Caafimaadka Leh
Tilmaamaha Degaanka ee Gentilly Si Aad Isugu Sameyso Nadiifinta Ciidda adoo adeegsanaya hababka dabiiciga ah
Duufaanta Katrina waxay caqabado badan u keentay dadka degan New Orleans. Qeyb ka mid ah geeddi-socodka dib-u-dhiska ma aha oo kaliya dayactirka guryaheena qaabdhismeedka, laakiin sidoo kale dhulkeenna si aan ugu nimaadno hoy ammaan ah, meel caafimaad leh oo aan ku noolaano kuna noolaanno. Nadiifinta carrada sunta ahi waxay muhiim u tahay hawsha dib-u-dhiska.
Hay'ada Caawinta Bulshada Reer Miyiga
Hagaha Dhismaha Cagaaran: Farsamooyinka Naqshadeynta, Ku Dhaqanka Dhismaha & Agabka Guriyeynta La Awoodi Karo
Dhismaha cagaaran waa qaab waqti la tijaabiyey, wax ku ool ah oo dareen leh
in la abuuro dhismayaal jawiga u wanaagsan. Dhismaha cagaaran
wuxuu isku daraa xigmad facweyn; dhaqanka iyo hababka naqshadaynta iskaashiga; iyo isticmaalka sayniska dhismaha ee casriga ah, farsamada iyo isticmaalka qalabka
Deegaanka iyo Maareynta Musiibooyinka
Soo kabashada Cagaaran & Dib u Dhiska: Qalabka Tababarka ee Gargaarka Bani'aadamnimada (GRRT)
GRRT waa barnaamij qalab iyo tababar loogu talagalay in lagu kordhiyo wacyiga iyo aqoonta hababka ka jawaab celinta musiibooyinka deegaanka. In kasta oo masiibooyinku halakeeyaan, haddana dadaallada dib-u-dhiska ee soo socdaa waxay u taagan yihiin fursad muhiim ah oo muhiim ah oo dib loogu soo celiyo bulshooyinka hab bey'adeed iyo bulsho ahaanba mas'uul ka ah.
Sida Loo Dhiso Filter Hawo Qiimo Jaban
Walxaha ku dhex jira qiiqa dabka duurjoogta ah waa caafimaad darro in la neefsado. Shaandheynta marawaxadda sanduuqa fudud ayaa kaa caawin doonta in hawo -gurigaaga nadiif ahaado.
Sida Loo Sameeyo Rocketstove
Qeybo ka mid ah Texas, duufaan jiilaal ayaa korantada ka saartay malaayiin qof. Waxaan ku aragnay baraha bulshada in saaxiibbada qaar ay adeegsanayaan hage ka yimid buuggeena, Recipes for Disaster, si ay u samaystaan ​​gantaal si loo kariyo biyaha loona kariyo cuntada. Waxaan isku taxallujinnay inaan cutubkaas khadka tooska ah u dhigno halkan haddii ay dhacdo in qof kale u baahdo-Texas maanta, ama meel kale oo masiibooyinka cimilada ee soo socda.
Halbeegyada Naqshadeynta Haamaha Biyaha ee Ferro-Cement iyo Faahfaahinta Dhismaha
Ferro-sibidhka asal ahaan waa fidinta tiknoolajiyada sibidhka caadiga ah ee la xoojiyay (RCC). Sidan oo kale, dhammaan faa'iidooyinka loo aaneeyay adeegsiga RCC ee dhismaha caadi ahaan waxay khuseeyaan ferro-cement sidoo kale. Waxaase jira, si kastaba ha noqotee, faa'iidooyin kale oo ka dhigaya ferro-sibidhka xulasho doorbid mashaariic badan oo dhismaha ah.
NABCEP PV Hagaha Kheyraadka Rakibaadda Xirfadlaha
Hagahan waxa uu daboolayaa qaar ka mid ah shuruudaha aasaasiga ah ee naqshadaynta iyo rakibidda nidaamyada PV
Tababbarka Qorraxda Ka Baxsan Qeybtii 1: Koorsada Shilka Awoodda
Korontadu waa qulqulka elektaroonikada wareegga wareegga. Korontadu waxay leedahay astaamo dhowr ah oo la cabbiri karo. Danab (volts), amperage (amps)
iyo watts (watts).
Tababbarka Qorraxda Ka Baxsan Qeybta 2: Dulmarka Tamarta Qorraxda
Waa maxay Solar PV System? Nidaamka Photovoltaic waa nidaamyo si toos ah uga soo saara korantada iftiinka qoraxda. Nidaamyadani waxay soo saaraan tamar nadiif ah oo la isku halleyn karo, illaa iyo inta qorraxdu ifayso!
Tababbarka Qorraxda Ka Baxsan Qeybta 3aad: Qeybaha Nidaamka Batariga Qorraxda
Sidee unugyada PV u shaqeeyaan: Unugyada sawir-qaadeyaasha ah waxay fallaadhaha qorraxda u beddelaan danab koronto. Fototonnadu waxay ku riixaan lakabka PV xagga dambe ee qolka PV. Elektronku waxay rabaan inay ku noqdaan qeybta kore ee unugga iyagoo maraya wadada ugu yaraan iska caabin
Tababbarka Qalabka-Qorraxda-Qeybta 4: Naqshadaynta Nidaamka Baytariga Qorraxda
Qiimeynta Awoodda: Maxaad u baahan tahay inaad xoog yeelato? Goorma, iyo illaa intee?
Tababbarka Qorraxda Ka-baxsan Qeybta 5: Qalabka iyo Qalabka
Isku dheelitirka nidaamka: Dhammaan qalabka farsamada iyo korontada iyo qalabka (marka laga reebo qaybaha waaweyn) ee loo baahan yahay si loo dhammeeyo rakibidda
Tababbarka Qorrax-Joogtada ah Qeybta 6: Amniga iyo Dayactirka
Awood sare! Korontada kaama digeyso ka hor inta aysan kaa naxin. Cabsida danab ee sare ayaa ku dili kara. Demi wax walba kahor intaadan nidaamka taaban
Tamarta Homer, et.al.
Awoodda Aaladda Caafimaadka
Qalabka Caafimaadka ee HOMER Powering waa nooc bilaash ah oo khadka tooska ah lagu abuuro naqshadaha bilowga ah ee nidaamyada tamarta korontada ee xarumaha daryeelka caafimaadka ee aan lahayn awood kale oo koronto ama ay leeyihiin koronto grid ah oo la heli karo muddo saacado ah oo la saadaalin karo maalin kasta. Qalabka waxaa loogu talagalay maareeyayaasha mashruuca, injineerada iyo maal-galiyayaasha warshadaha tamarta si loo fududeeyo habka naqshadeynta nidaamyada noocan ah.
Mabaadi'da Dhismaha, Waxyaabaha, iyo Naqshadaynta Haamaha Hawada
Mabaadi'da Dhismaha Haamaha Joogtada Yar ee Joogtada ah
Buug-gacmeedka 'Cob Builder' ee Buug-gacmeedka: Gurigaaga Adiga Ayaa Gacan-ku-sameysan kara
Ujeedada buug-gacmeedkan ayaa ah in lagu tuso sida aad u dhisi kartid guri aad sixir u leedahay, wax ku ool ah, oo muddo dheer sii jiri doona lacag aad u yar oo aad waqti fiican ku qaadanaysid!
Sahanka Cilmi-baadhista Mareykanka
Buugga Landslide Handbook: Tilmaame lagu fahmayo Gogol-dhigga
Buug-gacmeedkan waxaa loogu talagalay inuu u noqdo kheyraad loogu talagalay dadka ay saameeyeen go'doominta dhulku
aqoon dheeraad ah, gaar ahaan xaaladaha iyaga u gaarka ah
xaafadaha iyo bulshada.
Kooxda Maareynta Biyaha
Dhismaha Tippy Tap
Sida loo dhiso tilmaamaha tubbada tippy.